Madasha Jaamacadda SIU: Caqabadaha Haysta Dhismaha Dowladnimada Soomaaliya - Ahmed Abdihadi
Xasuustii 14 Oct.2017 October 14, 2021
Dal jiraha Daahsoon! October 12, 2021
Hawiye vs Darood iyo 30 kaddib! January 26, 2021
Khayre Mahad celin ma mudanyahay?! December 24, 2020
Madasha Jaamacadda SIU: Caqabadaha Haysta Dhismaha Dowladnimada Soomaaliya December 20, 2020
Madasha Jaamacadda SIU: Caqabadaha Haysta Dhismaha Dowladnimada Soomaaliya
waxaa sharaf ii ahayd in aan shir-soore ka ahaa madasha Jaamacadda Somali International University (SIU) ee 2020.Madasha oo lagaga hadlo arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxaa sannadkan marti ku ahaa Prof. Mohammed Sheekh Cismaan Jawaari oo runtii ku jira tiirasha ummadda Soomaaliyeed ee maanta. Markaan saas leeyahay waxaan ula jeedaa taariikhada, aqoonta, iyo waayo-aragnimada siyaasadeed iyo bulsho ee ku duugan.
Mowduuca madasha ayaa ahaa sannadkan: Caqabadaha Haysta Hanaqaadka Dhismaha iyo Dowladnimada Soomaaliya.Dalkeenno wuxuu ku jira waddamo kooban oo dunida ku yaalla oo muddo rubuc qarni kabadan uusan si fiican uga talin hal nidaam dowladeed oo sharciga iyo kala danbaynta haya. Haddaba, Waxaa meesha kabaxay mid kamid ah arkaantii gobonimada dowladeed ee dal yeesho.
Arrintan ayaa keentay in Soomaaliya ay tusaale u noqoto kasmooyinka siyaasadaha lagu dhigo adduunka oo markasta oo meel fowdo iyo dowlad la’aan ka jirto cashir ama qoraal lagu sheegiyo Soomaaliya loo soo qaato.
sidaas darteed, toosh ku ifinta iyo xal u helidda arrintan ayay madashu xoogga saartay.
Hadal jeedinta Prof. Jawaari waxaa xigay su’aalo iyo faallooyin ay arrinta ka dhiibteen ka soo qaybgalayaasha madasha oo ahaa labiinta jaamacadda iyo magaaladaba.
Hadal jeedinta oo dhammaystiran waxaad ka heli kartaa Youtube-ka Jaamacadda SIU, ama waxaad ka tix raaci kartaa bogagga jaamacadda ee Twitterka iyo Facebuugga.
Tanaasul la’aanta Madaxweyne Farmaajo iyo sababaha ka danbeeya!
Khayre Mahad celin ma mudanyahay?!
Xasuustii 14 Oct.2017
Hawiye vs Darood iyo 30 kaddib!